တစ်ခါသုံး Apron ၊
2021-11-30 ရက်နေ့တွင် admin မှ
ပထမဦးစွာ ပလပ်စတစ်အိတ်များ ရောနှော၍မရပါက ကွဲပြားသောလိုအပ်ချက်အလိုက် သက်ဆိုင်ရာ ပလတ်စတစ်အိတ်များကို ဝယ်ယူပါ။ ဥပမာ- အစားအစာထုပ်ပိုးအိတ်ကို အစားအသောက်ထုပ်ပိုးရန်အတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် ၎င်း၏ပစ္စည်း၊ နည်းပညာနှင့် အခြားသော ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးလိုအပ်ချက်များ ပိုမိုမြင့်မားပါသည်။ ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ အထည်တွေ...
1. တင်သွင်းလာသော ဆန့်ဖလင်နှင့် ရိုးရိုးဆန့်ဖလင်ကို ရွေးချယ်ခြင်း တင်သွင်းလာသော ဖလင်သည် ဆန့်နိုင်အား မြင့်မားသော၊ ကိုက်ဖြတ်နိုင်မှု အားကောင်းပြီး ဆုတ်ခွာမှတ်ဉာဏ်ကောင်းပြီး ထူးခြားသော နှိုက်ပျစ်နိုင်မှု ရှိသောကြောင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကာလအတွင်း ပြန့်ကျဲနေသော ပြိုကျမှုမှ ကာကွယ်ရန် အရာများစွာကို တစ်ခုလုံးကို တင်းကျပ်စွာ ထုပ်ပိုးထားနိုင်သည်။ မှာ...
ပလပ်စတစ် စွပ်ကျယ်အိတ် အရွယ်အစား သတ်မှတ်ချက်များ စွပ်ကျယ်အိတ် ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ သည် အဘယ်နည်း
2021-11-24 ရက်နေ့တွင် admin မှ
Vest bag ဟုလည်းလူသိများသော vest bag ဆိုသည်မှာ အင်္ကျီပုံသဏ္ဍာန်နှင့် ဆင်တူသောကြောင့် အကျီအိတ်ဟုလည်း ခေါ်ကြသော ပလပ်စတစ်အိတ်ဖြစ်သည်။ စွပ်ကျယ်အိတ်ကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း၊ အသုံးများသောအားဖြင့် စူပါမားကက်များ၊ စျေးဝယ်စင်တာများ၊ ရပ်ရွာသုံးကုန်စုံဆိုင်များတွင် အသုံးပြုကြပြီး လယ်သမားများ၏ ဈေးကွက်အခြေအနေမှာ အင်ဒီ...
1၊ ပထမဦးစွာ ပလတ်စတစ်အိတ်၏အသွင်အပြင်တွင် “အစားအစာ” ဟူသော လက္ခဏာရှိမရှိ သိရန်။ အများအားဖြင့် ဤလိုဂိုသည် အထုပ်၏ရှေ့တွင် ထင်ရှားသောအနေအထားတွင်ရှိသင့်သည်။ ဒုတိယအချက်ကတော့ ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရရင် အရောင်ဆိုးထားတဲ့ ပလပ်စတစ်အိတ်တွေကို အများအားဖြင့် စွန့်ပစ်ပလပ်စတစ် ပြန်လည်အသုံးပြုတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြုကြတာ မဟုတ်ပါဘူး...
ပလပ်စတစ်အိတ် ပလတ်စတစ် ထုတ်ကုန် ထုတ်လုပ်သူ
2021-11-16 ရက်နေ့တွင် admin မှ
DEZHOU DONGYU PLASTIC & PACKAGING CO.,LTD သည် လိုင်စင်ရ ထုတ်လုပ်သူနှင့် ခေတ်မီသော လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကို အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့် ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် Polythene (HDPE&LDPE&LLDPE) ထုတ်ကုန်များစွာဖြင့် လုပ်ဆောင်ပါသည်။... သင့်အတွက် စက်ရုံတိုက်ရိုက်စျေးနှုန်း။ ကုမ္ပဏီသည် စုစုပေါင်း အကျယ်အဝန်း 300 ကျယ်ဝန်းသည်။
လက်တွေ့ကျသော စားပွဲခင်းသည် ၎င်း၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို အာရုံစိုက်သည်၊ ယေဘူယျပစ္စည်းကို ပလပ်စတစ်ဖြင့် ဦးစားပေးမည်ဟု ကတိပြုသည်၊ အရောင်မှာလည်း တစ်ဆမျှသာဖြစ်သည်။ စားပွဲတွေရဲ့ အရည်အသွေးက ပိုမြင့်လာတာနဲ့အမျှ မိသားစုတော်တော်များများက စားပွဲပေါ်မှာ စားပွဲခင်းတွေ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲ သုံးကြတဲ့အခါ၊
“ဓာတ်တိုးဇီဝနှစ်ထပ်ပြိုကွဲခြင်း ဂေဟစနစ်ပလပ်စတစ်နည်းပညာ” ၏ ဆွေးမြေ့ပျက်စီးခြင်းဆိုင်ရာမူကား အဘယ်နည်း။
2021-11-08 တွင် admin မှ
Oxidative biodegradable plastic additive decomposition technology (ဥပမာ- ယေဘူယျ ဇီဝပတ်ဝန်းကျင်တွင် စွန့်ပစ်ခြင်းကဲ့သို့) အသုံးပြုပြီးနောက်၊ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအကြာတွင်၊ ထုတ်ကုန်သည် ရေ၊ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်နှင့် ဆယ်လူလာဇီဝလောင်စာအဖြစ် သဘာဝအတိုင်း ပြိုကွဲသွားနိုင်ပြီး ကြွင်းကျန်သော အော်ဂဲနစ်ပိုလီမာများ မရှိတော့ပါ။ .
ပလပ်စတစ်အိတ်များ၏ oxidative biodegradation အကြောင်း
2021-11-03 တွင် admin မှ
ပလပ်စတစ်အိတ်ပစ္စည်းများ – HDPE နှင့် LDPE အိတ်များတွင် ကွာခြားချက်
HDPE နှင့် LDPE အကြား အထင်ရှားဆုံးကွာခြားချက်မှာ HDPE သည် သိပ်သည်းဆမြင့်သော polyethylene ဖြစ်ပြီး LDPE သည် သိပ်သည်းဆနည်းသော polyethylene ဖြစ်သည် ။ မတူညီသော သီးခြားဆွဲငင်အား: HDPE နှိုင်းရသိပ်သည်းဆသည် 0.941~0.960၊LDPE သိပ်သည်းဆ 0.915~0.940။ ပုံပန်းသဏ္ဌာန်က မတူပါဘူး HDPE ရဲ့ မူလအခြေအနေက နို့သီးလေးတွေပါ...
2021-10-28 ရက်နေ့တွင် admin မှ
အမှိုက်အိတ်ကို မှန်ကန်သောနည်းလမ်းဖြင့် ထားရန်မှာ အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်၊ အမှိုက်အိတ်ကို ခဲအနည်းငယ်လွှဲပြီးနောက် အမှိုက်အိတ်ကို ဇောက်ထိုးထားပြီး အမှိုက်အိတ်ကို လက်ဖြင့် အမှိုက်ပုံးထဲသို့ ဖိထားရုံသာမက၊ လက်များသာမက အလွန်လက်တွေ့ကျသည်။ အမှိုက်အိတ်သည် အင်ဒီ...